Medical Writings ဆေးပညာစာများ: Q and A April 2011 (3)
Q and A April 2011 (3)
1. ဘာ့ကြောင့် အသားရေ ယားယံပြီး
2. ရန်ကုန် ရောက်ရင် အကောင်း၊ ဒီမှာနေမှ အေးရင်
3. ပေါင်အပြင်မှာ ကြာဆူးလိုပဲပြောရမယ်ထင်ပါတယ်
4. ချိုင်းမွေးရှည်ရင် ယားတယ်
5. So can I still continue this eating habit during my pregnancy?
6. HIV ဖြစ်မှာ စိုးနေလို့ပါ
7. အဲဒါ ကိုယ်ဝန်မှာ Problem ရှိနိုင်ပါလား ဆရာရှင့်
8. ဆီးစပ်နား ဗိုက်ပြင်က ဟိုနားနည်းနည်း ဒီနားနည်းနည်း နာနေတတ်ပါတယ်
3 Apr 11, 17:43
Q 1: ကျွန်တော် အသက်၂၉ ကျော်ပါပြီ။ လောလာဆယ် နိုင်ငံခြား ရောက်နေတယ်။ တော်တော်နဲ့ ပုံမှန်အသားရေ ပြန်မရဘူး။ လူကတော့ နေကောင်းပါတယ်။ ဘာ့ကြောင့် အသားရေယားယံပြီး ကုတ်လိုက်တိုင်း အမာရွတ် ကျန်နေတာလဲ ဆိုတာ သိချင်ပါတယ်။ ဆေးသောက်ဖို့ လိုတယ်ဆိုလည်း ညွှန်ကြားပေးပါ။ ခုတလော နုတ်ခမ်းတွေ ကွဲတယ်။ အရေပြားလဲ ယားတယ်။ ကုတ်လိုက်ရင်လည်း အမာရွတ်ဖြစ်ပြီး ကျန်နေခဲ့တယ်။
ယားတယ်ဆိုရင် (အလာဂျီ) မတည့်တာဖြစ်ဘို့ များတယ်။ မတည့်တာထဲမှာ ပိုးမွှား၊ အစားအသောက်၊ အသုံးအဆောင် အပြင် ရာသီဥတုလဲ ပါတယ်။ ဥတုပြောင်းချိန် အဖြစ်များတယ်။ ပိုးထဲမှာလဲ ဗက်တီးရီးယား၊ ဗိုင်းရပ်စ် နဲ့ မှိုတွေကနေ ဖြစ်နိုင်တယ်။ နုတ်ခမ်း ကွဲတာက ပိုးတွေကြောင့်ရော အစာအာဟာရကြောင့်လဲ ဖြစ်နိုင်တယ်။ အမာရွတ်ဆိုတာ ပျက်စီးသွာတဲ့ (ဆဲလ်) တွေကနေ ပြန်ပြင်ရ၊ အသစ်ဖြစ်ရလို့ ဖြစ်တာပါ။ ယားလို့၊ နာလို့ ဖြစ်တဲ့နောက် အမာရွတ်သဘော ဖြစ်လာလို့ အရောင်ပြောင်း၊ အပျော့-အမာ မတူ၊ အထူ-အပါး ခြားနားလာလိမ့်မယ်။ ဒါက မကြာပါ။ ပြန်ကောင်းလာပါမယ်။ ယားတာအတွက် Citrizine စားဆေးသောက်ပါ။ ဗီတာမင် (ဘီ-စီ-အေ) တွေ သောက်ပါ။ အစားအစာ မျှတပါစေ။
Q 2: ဆေးစစ်ပြီးပါပြီ။ Full medical check-up including X-ray and blood စစ်ထားပြီးသားပါ။ ဘာပြသနာမှ မရှိပါဘူး။ လေးဘက်နာပိုး ရှိ-မရှိနဲ့ သွေးစစ် ထားပြီးပါပြီ။ အဲ့တုန်းကတော့ ဘာ Symptom မှ ဖြစ်မနေပါဘူး။ ကြုံတုန်း စစ်လိုက်တာပါ။ ရာသီဥတုနဲ့ ဆိုင်တယ် ထင်မိပါတယ်။ (အေးလို့) ပြီးတော့ Stress ကြောင့်ပဲ ထင်မိတာပါ။ (၇-၄-၂ဝ၁၁) က Paracetamol ပါတာ သောက် အိပ်လိုက်တာ ဒီမနက် နိုးတော့ လက်က သက်သာတယ်။ ကွေးရင် သိပ်မနာတော့ဘူး၊ ဆေးက Onacine ပါ။ Paracetamol 500mg ပါလို့ သောက်လိုက်တာပါ။ ဟိုအရင် ဒီမှာလက်ရောင်တုန်းကတော့ Dr. (့) က ဆေးတွေ ပို့ပေးပါတယ်။ လူးဆေး Dicloran MS Gel သောက်ဆေး Longevite (လေးဘက်နာ) အတွက်ထင်ပါတယ်။ အစာအိမ် ထိမှာစိုးလို့ လေဆေးနဲ့ တွဲရတယ် ထင်တာပါပဲ။ FlexAnew (အဆစ်ကိုက်ရောင်) အတွက်ပါ။ စွဲပြီးတော့ သောက်ရပါတယ်။ သိပ်မထူးသလိုခံစားရလို့ပါ။ တိုင်းရင်းဆေးလည်း လူးဖူးပါတယ်။ မထူးပါ။ ရန်ကုန် ရောက်ရင် အကောင်း၊ ဒီမှာနေမှ အေးရင် Exam နီးစိတ်ရှုပ်လာရင် ဖြစ်ပြီ ထင်တာပါပဲ။ ၂ ခေါက် ၃ ခေါက် စလုံးက အဲ့လို ဖြစ်နေလို့ပါ။ အရမ်းလည်း စိတ်လှုပ်ရှားလွယ်၊ တစ်ခုခုဆို သူများထက် ပ်ိုစိုးရိမ်၊ စိတ်တွေဖိစီး၊ စိတ်ညစ်တတ်ပါတယ်။ ဒေါသလည်း ထွက်လွယ်ပါတယ်။ အဲ့တွက်ရော ဆေးသောက်စရာ လိုမလား။ စိတ်ငြိမ်ဆေးလေး ဘာလေးများ ရှိရင် စွဲသောက်ချင်ပါတယ်။ နှလုံးကလည်း အရမ်းခုန်တာမြန်ပါတယ်။ စာမေးပွဲခန်း ဝင်ခါနီးတုန်သလိုကို ခုန်နေ၊ တုန်နေတာပါ။ စိုးရိမ်၊ စိတ်ဓါတ်ကျနေပါတယ်။ စိတ်ကျရောဂါ Symptom တော်တော် များများလည်း ဖြစ်နေသလားလို့ပါ။ ဘာကြောင့် ဝယ်ရ-မရတော့ မပြောတတ်တာလည်း။ အလွယ် မရောင်းတဲ့ တားမြစ်ဆေးလိုများ ဖြစ်နေလို့လားရှင်။ Paracetamol 1 tablet4timesaday for5days သောက်ရင် လူရော အိပ်ချင်ပြီး နှုန်းနေတတ်လား။ ကျောင်းက everyday တတ်နေရလို့ပါ။
DICLORAN MS Gel ဆိုတာ Diclofenac diethylamine + Methyl Salicylate + Alpha-linolenic acid + Menthol G တွေပါတဲ့ အနာ-အကိုက်-အရောင် သက်သာဆေး ဖြစ်တယ်။
FlexAnew Tablets ဆေးက COX-2 Inhibitor ဆေးမျိုး၊ နာတာကို သက်သာစေတယ်။ Longevite နာမယ်နဲ့ဆေးတွေက မတူကြပါ။ အလှအပသုံးဆေး၊ အရေပြားချောဆေးလဲ ရှိတယ်။ လိမ်းဆေးတွေမှာ ပူတာ-မပူတာ ရှိတယ်။ အေးတဲ့ရာသီ ပူတာကောင်းတယ်။ မျက်နှာ၊ နုတ်ခမ်းမှာ မဟုတ်ရင် ပူတာ ကောင်းတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဆေးလိမ်းလို့ သိပ်မပူစေပါနဲ့။ မိန်းကလေး အရေပြားက နု-ပါးတယ်။ အရေပြား မလောင်စေပါနဲ့။ စိတ်ဖိစီးမှု ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒီအရွယ်မျိုးက စိတ်ထက်ကြတယ်။ တက်ကြွတယ်။ တနယ်တမြေ ရောက်နေရင် စိတ်ကို တမျိုး သက်ရောက်စေနိုင်တယ်။ တက်ကြွသင့်သလောက် တက်ကြွတာ ကောင်းပါတယ်။ စိတ်ညစ်တာ နဲ့ ဒေါသကိုတော့ ချုပ်တီးရမယ်။ ဆေးလိုတဲ့သူမှ လိုပါတယ်။ စိတ်ငြိမ်ဆေး မသောက်ချင်ပါနဲ့အုံး။ နှလုံးခုန်နှုန်းသိချင်တယ်။ စိတ်အေးလက်သာ ရှိချိန်မှာ ကိုယ့်လက်ကို စမ်းပါ။ လက်ကောက်ဝတ်၊ လက်မဘက်က စမ်းလို့ ရတဲ့ သွေးခုန်နေတာကို တမိနစ် ဘယ်လောက်လဲ ရေပါ။ ပုံမှန် တမိနစ်မှာ ၇ဝ-၈ဝ ရှိကြတယ်။ စိတ်တို ဒေါသကြီးတာ နဲ့ ရင်တုန်တာ ရောနေသလား သိချင်တယ်။
Q 3: ကျွန်တော့် ချစ်သူရဲ့ ဘယ်ဘက် ပေါင်အပြင်မှာ ကြာဆူးလိုပဲပြောရမယ်ထင်ပါတယ် အဲအနာလေးက ယားလည်း ယားတယ် စူးလည်းစူးတယ်တဲ့။ ကုတ်လိုက်ရင် အစိလေးတွေ ထွက်လာတယ်။ အဲနေရာကလည်း ပျောက်လိုက် ကြာဆူးလို ဟာလေးက ပြန်ထွက်လာလိုက်နဲ့ မပျောက်ဘူး ဖြစ်နေတယ်။ ဖြစ်တာကတော့ နှစ်ပတ်လောက်ရှိပြီ။ ကြာဆူးကို ပျောက်နိုင်မယ့် ဆေးလေးများရှိရင် ပြောပြစေလိုပါတယ်။
ကြာဆူး လို့ ပြောကြတာက အရေပြားမှာ ကြမ်းပြီး အဖု-အသီးငယ်လေးတွေထတာကို ပြောကြတာ များတယ်။ များသောအားဖြင့် တဒေါင်ဆစ်၊ ဒူးနေရာမှာ ဖြစ်တယ်။ အဖိခံရတာ များတဲ့နေရာမျိုးပေါ့။ ဒါမျိုးက ဗီတာမင် အေ ချို့တဲ့လို့ ဖြစ်တယ်။ ကလေးတွေ ဖြစ်တာ ပိုများတယ်။ တကယ်လို့ နေရာ တခုထဲမှာ ကွက်ဖြစ်နေရင် သေခြာကြည့်ရမယ်။ ပေါင် အပြင်ဘက်မှာ အနာလိုဆိုရင် တမျိုး ဖြစ်နိုင်တယ်။ ကြွက်နို့နဲ့ တူသလား။ ရောဂါသေခြာမှ ဆေးပေးတာ ကောင်းပါတယ်။ လိုမယ်ထင်ရင် ဓါတ်ပုံရိုက် ပို့နိုင်ပါတယ်။ ဖြစ်တဲ့သူ အသက်လဲ ထည့်ရေးပါ။ အနာရဲ့ အရွယ်အစား၊ အရောင်လဲပြောပါ။
Q 4: ချိုင်းမွေး၊ ဟိုအမွေးတွေကို ဘယ်လိုနည်းနဲ့ရှင်းတာ အကောင်းဆုံးပါလဲ။ ကျနော် ချိုင်းမွေးရှည်ရင် ယားတယ်။ ပြီးတော့ ချွေးထွက်ရင်လဲ နံတယ်။ ရိတ်တော့လဲ ပြန်ပေါက်တာ ယားပြန်ရော။ ဂျယ်သုံးဖူးတယ် စိတ်တိုင်းမကျဘူး။ ပြောင်လဲ မပြောင် အဖုသေးသေးလေးလဲ ထွက်လာတယ်။ ဟိုဟာကတော့ ရိတ်ပါတယ်။ ပြဿနာမရှိပါဘူး။ ဒါပေမယ့် အဲဒါ မှန်ကန်တဲ့နည်း ဖြစ်ပါသလား။
Waxing ဖယောင်းသုံးပြီး အမွှေးတုံးစေမယ် ကို ဖတ်ပါ။
Apr 9, 2011 at 8:27 PM
Q 5: I forgot to ask just now. I don’t like eating meat and mostly I eat is veggies, fish and prawn. So can I still continue this eating habit during my pregnancy? But I drinkacup of milk in every morning. I am thinking of eating more egg & drink more milk as I don’t eat meatalot. And I like to eat fruits also, I eat the2to3Sunkist’saday. Is it good for pregnancy?
Meat provides protein. Fish, prawn, eggs and pea are also rich of protein. All vegetable and fruits are good. Milk is great. You can read Nutrition article if you have interest and time.
Q 6: ကျွန်တော်က အခုအသက်၂၅ ပါ။ (....) မှာ နေပါတယ်။ လွန်ခဲ့သော ၃ ပတ်လောက်က အဖော်တယောက်နဲ့ လိမ်ဆက်ဆံခဲ့ပါတယ်။ အခုတခါတလေ လိမ်တံထိပ်နားက ပုရွက်ဆိတ်လေး ကိုက်သလို စစ်စစ်နဲ့ ဖြစ်နေပါတယ်။ တခါတလေမှပါ။ ပြီးတော့ ဆီးက ဝါနေပါတယ်။ နှုတ်ခမ်းလဲ ကွဲပါတယ်။ အဲ့တာ ဘာများ ဖြစ်မလဲ စိုးရိမ်နေမိတယ်။ အလုပ်ကလဲ အလေးအပင် မရတော့ တခါတလေမှာ အူကျသလိုနာတက်တယ်။ HIV ဖြစ်မှာ စိုးနေလို့ပါ။
လိင်ဆက်ဆံတာကို သံသယရှိရင် ဆီးအောင့်တာ၊ အရည်တခုခုဆင်းတာ၊ နာတာ သတိပြုပါ။ လိုရင် ဆေးသောက်ပါ။ ဆီးဝါသလို မျက်လုံး ဝါသလား။ တပါတည်း အစားအသောက် ပျက်သလား။ အသဲရောင် အသားဝါ (အေ) ဖြစ်မှာ စိုးရတယ်။ နားပါ။ ရေ-အရည် များများ သောက်ပါ။ အရက် ရှောင်ပါ။ နုတ်ခမ်းကွဲတာ ဝမ်းချုပ်သလား၊ ဗီတာမင် စီ နည်းသလား။ အူကျရင် မနာဘဲ ဖြစ်တဲ့ဘက်မှာ ဖေါင်း-ကျလာတယ်။ HIV သံသယအတွက် ဆေး (သွေး) စစ်ပါ။
Q 7: သွေးစစ်ပြီးတော့ ကိုယ်ဝန်က နှစ်ပတ် သုံးပက် လောက်ရှိပြီလို့ ပြောပါတယ်။ နောက်နှစ်ပတ်မှ လာပြီး နှလုံးခုန်သံ နားထောင်လို့ ရမယ်ဆိုလို့ နောက်နှစ်ပတ်မှ သွားပြရပါမယ်။ ဒါပေမဲ့ ဗိုက်ထဲနဲ့ ဆီးစပ်အပေါ်နားက ရာသီလာခါနီး နာသလိုမျိုး နဲနဲ နာချင်သလိုလို ရှိပါတယ်။ ရာသီလာခါနီး နာသလိုမျိုးပါ။ ဒါပေမဲ့ ရာသီလာရင် နာသလောက်တော့မနာ ပါဘူး။ နာတာကလဲ မိနစ်နဲနဲပါပဲ။ အဲဒါ ကိုယ်ဝန်မှာ Problem ရှိနိုင်ပါလား။ သွေးတော့အခုထိလုံးဝ မဆင်းပါရှင့်။ အခုက Folic acid နဲ့ Enervon-C သောက်နေပါတယ်။ ကိုဝန်ရှိရင် Omega3Fish Oil ရော သောက်လို့ ရပါသေးလား။
Congratulations! ကိုယ်ဝန်ရှိစ နဲနဲ နာတာလောက် စိုးရိမ်စရာမရှိပါ။ အားဆေးတွေ ကောင်းပါတယ်။ Omega3လဲ သောက်နိုင်ပါတယ်။ ကိုယ်ဝန် ရင့်လာရင် Calcium လဲ သောက်ရမယ်။ အစားအသောက် စားပေးပေါ့။
Q 8: သမီး သူငယ်ချင်းမှာ 5-01-11 တုန်းက သားအိမ်ခြစ်ရပါတယ်။ မေးလ်တွေပို့ဖူးပြီး မေးမြန်းဘူးပါတယ်။ ခြစ်ပြီး ဆေးတွေ ထိုး-သောက်တော့ သက်သာပါတယ်။ လကုန်တော့ ရာသီလာတော့ နည်းနည်း ပြန်နာပါတယ်။ အဲ့တုန်းက ဆရာပြောသလို သားအိမ်က သွေးဆင်းတော့ ညှစ်ရတာ ဖြစ်လို့ ပြန်နာတာ နားလည်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အခု ဒီ ဆီးစပ်နား ဗိုက်ပြင်က ဟိုနားနည်းနည်း ဒီနားနည်းနည်း နာနေတတ်ပါတယ်။ သူ့အမျိုးသားကလည်း အဝေးမှာ ရောက်နေတော့ အားငယ်နေပါတယ်။ သမီးတို့ လိုအပ်တာကို လုပ်လို့ရအောင်ပါ.။ နာတာက အမြဲတော့ မနာပါဘူး။ တစ်ခါတစ်ခါ အလယ် တစ်ခါတစ်ခါ ညာဘက် ဘယ်ဘက် စသဖြင့် နာပါတယ်။ ဘာဖြစ်တတ်ပါသလဲ။ ကလေးတွေ ဘာတွေ မရတော့မှာ ကိုလည်း စိုးရိမ်ပါတယ်။ အခုတလော နာတတ်နေတော့ စိတ်မချမ်းသာလို့ပါ။
• ဆီးစပ်နေရာနာတာမှာ သားအိမ်ပါတ်ဝန်းကျင် နဲ့ ဆီးအိမ် ၂ မျိုး တခုခုဖြစ်တာ ခွဲခြားရမယ်။ တွဲလဲ ဖြစ်တတ်တယ်။
• ဆီးအောင့်တာ၊ ဆီးခဏခဏသွား၊ သွားရင်နာ၊ ဆီးပူတာက ဆီးလမ်းမှာဖြစ်တာ။
• မွေးလမ်းဆိုတာ ဗဂျိုင်းနား၊ သားအိမ်အဝ၊ သားအိမ်၊ သားအိမ်ပြွန် နဲ့ မျိုးဥအိမ်၊ နောက်ပြီး အဲဒါတွေ ဘေးနားနေရာတွေ ဖြစ်တယ်။ တဆက်ထဲ သဘောပါဘဲ၊ အဖြစ်များကြတယ်။
• မွေးလမ်းမှာ ဖြစ်ရင် တခုခုဆင်းတာနဲ့ တွဲတာ များတယ်။ အဖြူ-အဝါ-သွေး ဆင်းနိုင်တယ်။
• ယားတာနဲ့ မယားတာလဲ မေးတယ်။
• တချို့မှာ အိမ်ထောင်ဘက်နဲ့ အတူနေရင် နာတာလဲ တွဲဖြစ်သေးတယ်။
• ခဏခဏဖြစ်မှ နောင် ကလေးရဘို့ ခက်တယ်။
• ရာသီလာခါနီး နာတတ်တာလဲ စဉ်းစားရမယ်။
• သွေးထိန်နေရင် ကိုယ်ဝန် ပျက်ချင်တာလား။ သားအိမ်ပြင်ပ-ကိုယ်ဝန်လား။
• ဆီးလမ်း၊ မွေးလမ်းမဟုတ်ဘဲ အစာလမ်းကိုလည်း မေ့မထားရဘူး။ ဖြစ်ရင် လေတို့၊ ဝမ်းတို့နဲ့ ဆက်နေမယ်။
• ဗိုက်ညာဘက် အောက်နားဆိုရင် အူးအတက်ကို ထည့်တွက်ရမယ်။
• ဗိုက်အောက် ဘယ်ဘက်ဆိုရင် ဝမ်းကိစ္စ။
• ဖြစ်နိုင်စရာတွေ ရေးပြလို့ စိတ်ညစ်-စိတ်ရှုတ်မသွားပါနဲ့။ မေးတဲ့သူမှာ ဖြစ်နိုင်စရာအများဆုံးက မျိုးပွါးလမ်း ရောင်တာပါ။
1. Painkiller (Ibuprofen, Diclofenic, Paracetamol) တခုခု သောက်စေပါ။ တခါသောက် ၁ ပြား၊ တနေ့ ၃-၄ ကြိမ် သောက်ပါ။ ၃-၄ ရက်ထက် မကြာလောက်ပါ။
2. ပိုးသေဆေးလဲ သောက်သင့်တယ်။ (အသင့်အတင့်) ဆိုးတဲ့ တင်ပဆုံရိုးတွင်း အင်္ဂါတွေ ရောင်တာအတွက် -
• Ceftriaxone 250 mg IM ထိုးဆေး ၁ လုံးထိုးပါ။ ဒါမှမဟုတ် Cefoxitin2g ထိုးဆေး IM ထိုးပါ။
• Doxycycline စားဆေး တခါသောက် ၁ လုံး၊ တနေ့ ၂ ကြိမ်၊ ၁၄ ရက်သောက်ပါ။
• ပိုသေခြာအောင် Metronidazole စားဆေး တခါသောက် ၁ လုံး၊ တနေ့ ၃ ကြိမ်၊ ၅-၇ ရက်သောက်ပါ။
အကောင်းဆုံး ဆေးညွှန်းဖြစ်ပါတယ်။ ထိုးဆေး လက်လှမ်းမမီရင် သောက်ဆေး ၂ မျိုး အားကိုးနိုင်ပါတယ်။